Brief fampidirana ny EPA - Nantong ANT milina Co., Ltd
Brief fampidirana ny EPA
The United States Environmental Protection Agency (EPA na indraindray USEPA) dia sampan-draharaha ny U.S. fitondram-panjakana federaly izay natao ho an'ny zava-kendren'ny olombelona fiarovana ny fahasalamana sy ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fanoratana sy ny fampiharana fitsipika mifototra amin'ny lalàna nandalo Kongresy. Ny EPA dia naroson'ny Filoha Richard Nixon ary nanomboka tamin'ny Desambra miasa 2, 1970, Nixon taorian'ny nanao sonia ny didim-panjakana.
Ny EPA manana ny foibeny ao Washington, D.C., birao isam-paritra ho an'ny tsirairay ny fahafahana misafidy \_ 's folo faritra, ary 27 laboratoara. Ny fahafahana misafidy mitarika fanombanana ny tontolo iainana, fikarohana, sy ny fanabeazana. Manana andraikitra ny fihazonana sy ny fampiharana fenitra-pirenena isan-karazany eo ambanin'ny lalàna momba ny tontolo iainana, amin'ny fifampidinihana amin'ny fanjakana, foko, sy ny fitondram-panjakana eo an-toerana. Tsy mamela ny sasany solontena, fanaraha-maso, ary ny fampiharana andraikitra U.S. Hoy ny ary Indianina any Amerika foko. EPA fampiharana ny fahefana dia ahitana lamandy, sazy, sy ny fepetra hafa. Ny fahafahana misafidy ihany koa ny miasa amin'ny orinasa sy ny ambaratongam-pitondrana rehetra ao amin'ny isan-karazany ny fandaharan'asa fisorohana ny fandotoana an-tsitrapo sy ny ezaka fiarovana ny tontolo iainana angovo.
Ny fahafahana misafidy dia manana eo ho eo 17,000 mpiasa manontolo andro. ary maro kokoa ny olona Manao amin'ny fifanarahana fototra. Maherin'ny antsasaky ny EPA olona loharanon-karena ireo injeniera, mpahay siansa, manam-pahaizana manokana sy ny fiarovana ny tontolo iainana; Anisan'ny vondrona hafa ara-dalàna, raharaha-bahoaka, ara-bola, sy ny teknolojia vaovao.
Logo ny EPA
Prev: Brief fampidirana ny Air-madio
Manaraka: Technical fototry ny Rammer